Ego maka tankị Ụwa nke tankị na February 2019: ọgụ!
Ezi ụtụtụ, comrades tankers! Site na votu a na-ewu ewu na mpaghara ya, Wargaming ekpebila nke a ga-ekesa ego ndị tankị na February 2019. Ekerere nnyocha ahụ n'ime akụkụ abụọ, ebe e kpebibiri ya nke na-alụ ọgụ nkeji ga-enweta ego na mbu na nkera nke ọnwa ahụ. Ihe karịrị puku mmadụ iri na ise keere aka na ntuli aka ọ bụla.
Top iri indie egwuregwu 2018
Ihe omume Indie, ọtụtụ mgbe, gbalịa iju ya anya ma ọ bụrụ na ọ bụghị ndị dị mma, mmepụta pụrụ iche nke nkwụsịrị na mmepụta ego nke ọtụtụ nde, ma n'eji nkwenye siri ike, ngwọta dị mma, nhazi mbụ na egwuregwu dị iche iche nke egwuregwu egwuregwu. Egwuregwu site na ụlọ ọrụ onwe ha ma ọ bụ onye na-azụlite oge na-adọrọ mmasị ndị egwuregwu na ihe ijuanya ọbụna ndị ọkachamara kachasị mma.
Top 10 egwuregwu kacha mma na PC 2018
Egwuregwu kachasị mma maka mgbakwunye na PC na 2018, gụnyere na ọnụego kachasị ewu ewu ma chọọ. A kwadoro egwuregwu ndị a na-atụ anya ya, gụnyere Battlefront-2 ma ọ bụ Wolfenstein-2, site na ịmalite ngwaahịa ọhụrụ maka usoro ntanetị ọ bụla dị ugbu a site na ndị mmepe nzuzo. Ihe Ngwakọta PC kacha elu 2018: Top 10 Crossout PlayerUnknown Battlegrounds (PUBG) Alaeze Ukwu na-agbachitere Far Cry 5 Icarus Online Quake Champs Darksiders III Fallout 76 Crackdown 3 Vampyr Best PC Games 2018: Top 10 Top Egwuregwu nke 2018 bụ n'etiti egbuke dị iche iche genres nke kwesiri ijide elu nke ugoro dika echiche nke ndi egwuregwu na nyocha nke otutu ndi nkatọ.
Egwuregwu iri kachasị anya nke December 2018
Egwuregwu kachasị anya nke December 2018 ga-eme ka ị nwee oge ọ bụghị naanị na-adọrọ mmasị, kamakwa ọ bara uru. Dịka ọmụmaatụ, ha ga-enye nkuzi ndụ na megacity, melite mmeghachi omume, na, ọzọ, obodo 20 dị iche iche nke ụwa ga-enyere aka ịmatakwu anya. Isiokwu Ndị dị n'Akwụkwọ A 10 kachasị anya egwuregwu nke December 2018
Egwuregwu PC oge ochie ka na-egwuri egwu: akụkụ nke 3
Egwuregwu site n'oge anyị bụ nwata aghọwo ihe karịrị nanị ntụrụndụ. A na-echekwa ọrụ ndị a ruo mgbe ebighi ebi na ncheta, na ịlaghachikwute ha mgbe ọtụtụ afọ gasịrị na-enye ndị na-egwu egwuregwu dị ịrịba ama, bụ ndị weere na ha ga-ahapụ oge kachasị mma. N'okwu ndị gara aga, anyị kwurula banyere egwuregwu ochie ndị ka na-egwu.
Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke Ụlọ ọrụ Ụgbọaka ga-adị ka Mkpa Maka Ọsọ ọsọ
Ndị mmepe nke otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ụgbọala simulator Project CARS na-akọrọ nkọwa maka ọbịbịa na-abịanụ. Dị ka isi nke ụlọ ọrụ Slightly Mad Studios, Ian Bell, kwupụtara, ịga n'ihu n'usoro isiokwu a, nke ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu ga-ahụ, ga-ewepụta ngwa ngwa maka mmepe nke ihe egwuregwu nke egwuregwu. O yikarịrị ka egwuregwu nke Project CARS 3 dị ntakịrị ihe dị mkpa maka ọmarịcha mkpa maka ọsọ ọsọ, nke ndị nnọchiteanya ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na ndị Canada si EA.
Top 20 Dandy egwuregwu ị nwere ike ugbu a na-egwu na kọmputa gị
Ugbu a, prefix Dendy bụ ụkọ, ọ dịghịkwa ihe ọ bụla eji eme ihe. Naanị usoro akụkọ egwuregwu nke egwuregwu vidio, bụ nke m chọrọ ịmalite ọzọ, nọgidere na-echeta m. Maka nzube ndị a, e mepụtara ndị pụrụ iche na PC na-akwado egwuregwu dandy. Top 20 n'ime ha na-ewu ewu ọ bụghị nanị n'etiti ọgbọ nke Dendy, kamakwa n'etiti ndị na-eto eto.
Otu narị izu abụọ nke izu FIFA 19: ndị meziiri ọnọdụ ha
Ndị mmepe nke FIFA 19 site na Electronic Arts mara ọkwa ọhụrụ nke XXI nke izu. Oge a ka ihe mejupụtara wee ghọọ ọgụ dị ka ọ dịtụbeghị mbụ. Isiokwu nke ọdịnaya Ndị kachasị egwu nke òtù XXI FIFA 19 Onye na-eche nchebe Central na-agbachitere N'aka mpụga Nri aka ekpe Central midfielders Nzuzo nke ihe nchekwa Top Player of XXI team FIFA 19 Ndị egwuregwu na-emeworị ndokwa a ichu nta n'ihi na mma kaadị kaadị!
10 kacha mma nke ochie PC egwuregwu: mmụọ akwụkwọ mmụọ
Egwuregwu ụfọdụ, dịka mmanya - karịa afọ ole na ole ka mma. N'eziokwu, ọganihu adịghị eguzo, ndị na-ese onyinyo ọrụ ndị a anaghị adịte aka, yana usoro nkà, nkà na ụzụ, na ihe ndị ọzọ dị mkpa. Achọpụtaghị ihe ndị a n'oge gara aga site na ndị na-emepe emepe na-ekere òkè n'ịmegharị ihe.
PS na Xbox: iji tụnyere mgbakọ egwuregwu
A na-eche ọkwa ọhụụ dị na PS ma ọ bụ Xbox. Ụdị ụdị abụọ a na-akwalite, na-adị n'otu ọnụahịa. Nzaghachi onye na-emekarị anaghị enye nkọwa zuru oke nke ihe kacha mma. Ihe niile dị mkpa na nuances dị mfe ịmụta na ụdị tebụl nke ntanetị abụọ. Na-egosi ụdị ọhụrụ ndị ọhụrụ maka 2018.
5 na-ere egwuregwu na 2018 PS4
Kwa afọ, ụlọ ọrụ ntụrụndụ na-eme ka kọmputa dị nso n'ihe ndị ọkà mmụta sayensị dere na narị afọ gara aga hụrụ. Egwuregwu Kọmputa na mgbakọ na-eju anya na ndị na-ese ha, ihe nkedo atụmatụ na ihe ndị ọzọ. O doro anya na PS4 bụ otu n'ime mgbakọ dị elu, na 2018 enwere ọtụtụ egwuregwu maka ya.
Top 10 egwuregwu kacha mma maka PS 2018
Ihe kacha mma 10 kacha mma maka PS 2018 na-ekwu okwu maka onwe ya: ọnwa iri na abụọ wee ghọọ ọgaranya na-adọrọ adọrọ ma na-egbuke egbuke premieres. Ekele na ha, ndị na-egwu egwuregwu nwere ike ịga njem n'oge na mba: ha dị ka ndị na-anụ ọhịa Wild West, ndị knights site na Middle Ages, ndị agha na ndị Japan mafia na ọbụna Spider-Man.
Otu esi agbachi ihe nkedo laptọọpụ
Ndewo Onye ọrụ na-achọghị ka laptọọpụ ya rụọ ọrụ ngwa ngwa? Ọ dịghị otú ahụ! Na n'ihi na isiokwu nke overclocking ga-adị mkpa mgbe niile ... Nhazi ahụ bụ otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke kọmputa ọ bụla, nke na-emetụta ngwa ngwa nke ngwa ahụ. Mbelata ya ga-eme ka ngwa laptọọpụ dị ngwa, mgbe ụfọdụ ọ dị nnọọ mkpa.
10 bọtịnụ kachasị mma egwu na AliExpress
Onye ọ bụla na-ahụ n'anya gamer maara otú isi ụlọ ọrụ "ọrụ" na-adịghị adịte aka ma dị mkpụmkpụ nakwa otú o si sie ike ịchọta ezigbo egwuregwu egwuregwu maka ezi ego. Ihe ngwọta nwere ike ịzụta ngwaọrụ kpọmkwem site na Middle Kingdom. Nke a bụ ogo nke bọtịnụ kachasị mma na Aliexpress. Ihe dị na 10. Oklick 760G - 1000 rubles 9.
Egwuregwu ahụ na-agba ọsọ, na-atụgharị ma na-eme ngwa ngwa. Kedu ihe a ga-eme iji mee ngwa ngwa?
Ezi ụbọchị. Ndị egwuregwu niile (ma ọ bụghị ndị na-amateurs, echere m,) kwara na eziokwu ahụ na-agba ọsọ malitere ịkụda: foto ahụ gbanwere na ihuenyo ya na jerks, jerked, mgbe ụfọdụ, o yiri ka kọmputa ọ na-adabere (maka ọkara nke abụọ). Nke a nwere ike ime n'ihi ihe dịgasị iche iche, ọ bụghị mgbe niile ka ọ dị mfe ịchọpụta "onye na-eme ihe ọjọọ" nke dị otú ahụ (lag - sụgharịrị n'asụsụ Bekee: lag, lag).
Top 20 egwuregwu ịntanetị ị nwere ike nweta
Ụmụaka na ndị okenye na-enwe mmasị igwu egwu egwuregwu n'ịntanetị, mana ọ bụghị mmadụ niile maara na ha nwere ike ịbụ ọ bụghị naanị oge kachasị mma, kamakwa ezigbo ego. Ihe kachasị mkpa bụ ịhọrọ oru ngo nke na-enye gị ohere ịgbanwe ego ị nwetara maka ezigbo ya ma wepụ ya site na usoro ịkwụ ụgwọ ego, mgbe ị gachara, ị ghaghị ịbanye n'ime ụwa a ma nwee obi ụtọ abụọ.
Nhọrọ nke egwuregwu free maka ndị debanyere aha PS Plus na Xbox Live Gold na Jenụwarị 2019
A na-enyefe ndị na-edebanye aha nke PS Plus na Xbox Live Gold na-aga ahịa n'efu kwa ọnwa. N'ọnwa afọ 2019, ndị ọrụ nke mgbakọ na-eduga ga-enweta egwuregwu ọhụrụ maka onwe ha n'enweghị akwụ ụgwọ otu ruble maka ha. PlayStation Plus ndị debanyere aha ga-enweta ọrụ isii n'otu oge, Xbox Live Gold ga-enye ndị ọrụ naanị anọ.
Black Friday 2018: ihe egwuregwu nkwa ego
A na-emepụta Black Friday na America, mana mmeri a na-anụghị mmesapụ aka mere ka ndị Russia hụ ya n'anya. N'otu oge ahụ, ndị na-azụ ụlọ, n'ime ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ nke ego, na-enweta ma ọ bụghị naanị ngwa ngwa ụlọ, ihe eji akwa ákwà ma ọ bụ ihe ụmụaka ji egwuri egwu, kamakwa mmemme kọmputa ndị dị ọnụ ala (ọ bụ naanị ruo oge ụfọdụ).
Nkwebe ohuru ohuru 2019 na enye ndi furu egwu n'egwuregwu PC nke otutu onu ogugu di iche iche maka onu o bula. Anyị na-atụ anya na ndị na-agba egwu, ndị na-ewe iwe ọkụ, usoro nyocha, hardcore slashers, ogologo oge echere na ọtụtụ ihe. Egwuregwu iri kachasị atụ anya na 2019 gụnyere ọrụ ndị ị na-ekwesịghị ichefu!
Njirimara kachasị elu na Sony PlayStation 4
Egwuregwu Sony PlayStation jikọọnụ na Japan mara ndị na-egwu egwuregwu kemgbe afọ 90. Igwe ihe a abiala otutu oge, ma ugbu a bu otu n'ime ndi choro ya. Sony PlayStation 4 nwere ike ịnya isi ọ bụghị naanị ọrụ dị mma na ikike igwu egwu na Full HD, kamakwa ihe kachasị mma maka ọtụtụ ndị ahịa ga-azụta ngwaọrụ a maka onwe ha.